Maxkamadda Gobolka Banaadir oo la horkeenay Ajaanib & Soomaali - Awdinle Online
Maxkamadda Gobolka Banaadir oo la horkeenay Ajaanib & Soomaali
Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa maanta u fadhiisatay gal-dacwadeedka ciqaabta ah ee sumaddiisu tahay MGB/DDL/179/2021, kaasi oo loo heystay eedeysanayaal ay ka midyihiin lix qof oo 4 ka mid ah ay yihiin Ajaanib, kuwaasi oo dhamaantood ahaa shaqaalihii iyo aas aasaasayaashii shirkadda SAHAN RESEARCH.
Shaqaalahan ayaa lagu soo eedeeyay falal ay ka midyihiin faafinta xogaha amniga Qaranka iyo basaasid siyaasadeed, kuwaasi oo ku xudgudbay qodobada 1999-200-201-202-204-205-71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, iyagoo dhamaantood ay yihiin maqanaayaal horeyna ay maxkamaddu u sameysay baafin iyo u yeeritaan laakiin ay imaan waayeen, maxkamaduna ay qabatay qareeno difaaca eedeysanayaasha.
Intaa ka dib qareenadii waxa ay keeneen fadhigii maxkamadda ee manta is hortaag ka dhan ah xaashida eedda, sidoo kale xafiiska xeer ilaalinta Guud ee Qaranka ayaa ka jawaabay is hortaagaas, waxaana ay maxkamaddu ku soo afmeertay fadhigan inay qaraar ka soo saareyso is hortaagaas ay keeneen qareenada difaacaya eedeysanayaasha.
intaa kadib qareenadii waxa ay keeneen fadhigii maanta is hortaag ka dhan ah xaashida eedda, sido kalena Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranku wuxuu ka jawaabay is hortaagaasi, Maxkamadduna waxay kusoo afmeertay fadhigan in ay qaraar ka soo saarayso is hortaagaasi ay keeneen qareenada Difaaca Edeysanayaasha.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo Warqadaha Aqoonsiga ka guddoomay Safiirka Cusub ee Hindiya
Next articleBanaanbax ka dhacay dowlad degaanka Soomaalida